Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): April 2016
ကမ္ဘာမှာ ဗုဒ္ဓ ဘာသာကို အငြိမ်းချမ်းဆုံးဘာသာလို့ဆိုပေမဲ့ မြန်မာပြည်ကတော့ မဟုတ်နိုင်
Moe Zaw ThuFollow
April 25 at 12:53pm ·
မြိုင်ကြီးငူကို အခါတော်ပေးတာ ဘယ်သူလည်း …?
ဝီရသူကို မြောက်စားတာဘယ်သူလည်း … ?
Seng Jaw and2others shared Moe Zaw Thu's post.
RFA သတင်းဌာနကမေးမြန်းထားတဲ့အပေါ် DKBA ဗိုလ်မှူးကြီးစောဆန်းအောင်ဖြေကြားထား
at 4/27/2016 11:35:00 AM
Saw William Kyaw added2new photos — with Saw Stylo and Saw Karen.
အမှန်တရားဘက်တော်သား DKBA ဗိုလ်မှူးကြီးစောဆန်းအောင် ကိုလေးစားပါတယ်
အခုလို ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းဝန်းနဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာ ဗလီလမ်းကြားတွေမှာ မြိုင်ကြီးငူဆရာတော် စေတီတည်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး
RFA သတင်းဌာနကမေးမြန်းထားတဲ့အပေါ် DKBA ဗိုလ်မှူးကြီးစောဆန်းအောင်ဖြေကြားထားတာက
# စေတီတည်ရာမှာ သူတို့အဖွဲ့ DKBA မပါဝင်ကြောင်း
# စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းထားတဲ့ စောချစ်သူရဲ့ BGF နယ်ခြားစောင့်တပ်များဖြစ်နိုင်ကြောင်း
# လက်နက်ကိုင်နဲ့ ဘုရားတည်တဲ့အလုပ်က ဘာမှမသက်ဆိုင်ကြောင်း
# မြိုင်ကြီးငူအနေနဲ့ တခြားဘာသာဝင်တွေရဲ့ သာသနာ့ပိုင်နယ်မြေမှာ စေတီလိုက်တည်နေတာ သိရတော့ အရမ်းအံသြမိပါကြောင်း
# အစိုးရသစ် အပြောင်းအလဲစချိန်မှာ ဘာသာရေးပြဿနာဖြစ်ပွားအောင် အကြံရှိရှိလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ ထင်မြင်ယူဆကြောင်း
# အားလုံးနဲ့အတူ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါကြောင်း
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ အခုလိုအမှန်တရားပြောပေးဖော်ရတာကိုပဲ ကျေးဇူးတင်လှပါပြီ။
လေးစားပါတယ် ဗိုလ်မှူး 👍👍👍
at 4/27/2016 11:16:00 AM
photo credit: khon ja